Antalya’da Tünektepe Teleferik’e Yoğun İlgi – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaDulsaarka weyn ee Tünektepe Teleferik ee Antalya
29 / 06 / 2018 07 Antalya, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Antalya degmada Metropolitan, shimbir ee Antalya view isha of fursad ay bixiyaan Tunektepe baabuur cable iyo tas-hiilaadka bulshada, sannaddii kowaad 2018 6 200 kun oo booqanaya shir ee gaariga. Cableway in Antalya waxa uu noqday mid ka mid ah soo jiidashada cusub.
Antalya qalbigiisa garaaca in Tunektepe. Dowlada Hoose ee Metropolitan cagaha yihiin off dhulka 'oo la furay-dhigyo ay Tunektepe Cable Project Car ahayd lagama maarmaan ah Antalya. Citizens muujiyeen xiiso weyn ee Tunektepe ah, kooxda martida ah, awelna loola kululaaneysa ee hawada iyo bilowgii xilli ciyaareedkan fasaxa. kulaylka xagaaga ka tan badiyey hawada qabow salaamaya martida ee shirwaynaha. Gaariga cable u dalxiisayaal gudaha iyo dibadda ay imaanayaa magaalada ayaa soo bandhigeysa xiisaha weyn. bilood 2018 6 ee sannadka, xarunta ugu horeysay oo sidda 200 kun oo booqanaya shirwaynaha, vacationers yimaada Antalya waxa uu noqday xarunta of jiidashada ay u tagaan oo aan. 36 1200 saacad cable gaari qaadi karaan qol ay ugu adeegaan dadka. Waxay qaadataa oo ku saabsan daqiiqo oo ay gaari karaan mitir Tunektepe 9 605 ee sare.
Ku raaxeyso cuntadaada muuqaalka quruxda badan
Xarumaha Bulshada ee Teleferik, oo ku yaalla shirwaynaha Tünectepe, ayaa noqotay xarun nololeed oo ay ku soo booqdeen martigeliyahooda. Muwaadiniintu waxay u adeegsan karaan cunto iyo cabitaan ay u baahan yihiin cuntooyinka hodanka leh, oo ay wehliyaan aragtida cajiibka ah ee makhaayadda baabuurta ee cable. Intaa waxaa dheer, xayawaannada 4 ee ku yaalla hudheelka ayaa leh fursad ay ku sahamiyaan Antalya. Booqashooyinka Tünektepe sidoo kale aad ayey ugu faraxsan yihiin khibradda gaadhiga. Sebati-Arzu Ozturk, oo markii ugu horeysay yimid Jarmalka oo uu lahaa khibrad gaar ah, ayaa sheegay in soo galnay waan ku qancay. Adeeggu wuxuu ahaa tayo wanaagsan, qiimuhuna aad ayuu u jaban yahay. Maanta waxaad heleysaa waxoogaa xasiloon laakiin cimilada. Marka xigta waxaan haysanaa sabab aan ku imaano. Marka aan dib ugu laabanno Jarmalka, dhab ahaantii waan ku soo celin doonaa halkaan saaxiibadeena
Adeegga Waaweyn ee Big
Rukiye Tezcan, oo ka timid Manavgat iyada oo gabadhiisii ​​si ay u tagto Tünektepe, ayaa yidhi, waayo waa meel aad u fiican. Runtii waan jeclaan lahayn. Waxaan aaday meelo badan oo dibedda ah. Waxaan filayay qiimaha aad u sareeya. Waan la yaabay sababtoo ah qiimaha waa mid aad u macquul ah. Adeeggu wuxuu ahaa mid aad u fiican. Adeegga dhabta ah. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u mahadcelino Menderes Türel. Waxaan rajeyneynaa guulo badan
Wax walba waa mid qurux badan
Filiz Tek ayaa sidaas yidhi, Fil waan ku faraxsanahay in degmada ay meeshan ku socoto. Wax walba waa mid qurux badan. Qiimaha waa la awoodi karaa, adeeggu waa tayo wanaagsan. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo wax ku biiriyey. Waxaan doonayaa in qof walba uu booqdo meel qurux badan, "ayuu yiri.
Qiimayaasha waa kuwo aad u jaban
Muzaffer Algun iyo wiilkiisa Melih Algun oo u yimid Antalya si fasax ah oo ka yimid İzmir, ayaa sheegay, "Waddada waa qurux badan. Waa arin weyn. Qiimuhu waa mid aad u jaban oo la awoodi karo. Mid kasta oo ka mid ah kulamada qoyska iyo saaxiibtinimada, waxaan ka hadli doonaa xusuusta wanaagsan. Waxaan ka hadli doonnaa qurxintaas
Antalya Maamulka Gobolka ee Gaarka ah Tünektepe Teleferic qandaraaska dhismaha ön
Antalya Maamulka Gobolka ee gaarka ah ayaa u furaya hindise loogu talagalay dhismaha Tünektepe Cable Car
Ogeysiiska Qandaraaska: Dhismaha Tunektepe Telefoonada Isgaarsiinta Telefoonada Antalya
Ogeysiiska Qandaraaska: Antalya Tünektepe wuxuu ka shaqeynayaa kabtanka baabuurta
Antalya Tünektepe dhismaha baabuurta tareenka ayaa soo gabagabeeyay
Horumar cusub ayaa lagu diiwaan geliyay hindise-ka-ga ah ee Antalya gaar ah ee Tünektepe Cable-ka
Tünektepe Mashruuca Baabuurta Cable ee Antalya
RayHaber 29.06.2018 Warbixinta Shirka
Daraasadda Ballaadhinta Wadada ee Degmada Bitlis